बेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ? – AB Sansar
June 14, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on बेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ?
पछिल्लो २४ घण्टामा २९१८ कोरोना संक्रमित थपिए, आज पनि यतिले गुमाउनु पर्यो ज्यान।